မိန်းမကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ စရိုက်လက္ခဏာ ၈ ခု
ဒီနေ့ပြောပြချင်တာကတော့ မိန်းမကောင်းတစ်ယောက်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ? သူတို့မှာ ဘယ်လိုစရိုက်လက္ခဏာတွေ အရည်အချင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီတော့ နိဒါန်းတွေ ရှည်ရှည်ဝေးဝေးမရေးတော့ပဲ အောက်မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်..
ယောကျာ်းတွေအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ မနာလိုဝန်တိုမှုတွေ မဖြစ်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံးနေပါတယ်။ အချို့မနာလိုမှုတွေက ချစ်သူ ရည် းစား အိမ်ထောင်သည်တွေမှာ ရှိတာ သဘာဝကျပေမယ့် သူတို့က မနာလိုမှုအစား ယုံကြည်မှုတွေပေးပြီး ကိုယ့်ချစ်သူခင်ပွန်းကိုလုံခြုံစေချင်ကြပါတယ်။ ရင့်ကျက်ပြီး တည်ငြိမ်တဲ့ မိန်းမကောင်းတစ်ယောက်ဟာ သူမဘဝမှာ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကို ပေးပါလိမ့်မယ်။ သူတို့က လူသားဆန်လွန်းပါတယ်။
သူတို့က ဿမန်မိန်းမတွေလိုမဟုတ်ပဲ ရုပ်ရည်ထက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကောင်းမွန်မှုကို ဦးစားပေးကြည့်တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ ထူးခြားတဲ့ညဏ်အသိနဲ့ လေးနက်တဲ့ ဆက်ဆံမှုတွေပြည့်နေပါတယ်။ဘယ်အရာကိုမှ ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောမထားတတ်ဘူး။ ညဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေလုပ်တတ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသော အကြောင်းအရာများကို အမှန်တစ်ကယ် ကောင်းမွန်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတတ်ကြပြီး ဒီအရည်အချင်းက သူတို့အလှကို ပိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။
များသောအားဖြင့်တော့ ယောကျာ်းကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းမကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် လူကောင်းတစ်ယောက်ဟာ ရိုးသားဖြောင့်မတ်ကြပါတယ်။ လိမ်လှည်လှည့်စားတတ်သူတစ်ယောက်နဲ့ဆို သင့်အချစ်တွေဘယ်လောက်ကြာကြာ တည်တံနိင်မလဲ? သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ချစ်သူရည်းစားက ယုံကြည်ဖို့မကောင်းဘူးဆို ရေ ရှည်ဘယ်လိုတည်မြဲနိုင်ပါ့မလဲ?
ပြောချင်တာကတော့ ကိုယ်ချင်းစာတရားကြီးမားပါတယ်။ အရာရာကို အတ္တကြီးစွာ မဆုံးဖြတ်တတ်ကြပါဘူး။ သူတို့တစ်ခုခုပြောတိုင်း လုပ်တိုင်းမှာ ကိုယ်ချင်းစာတရားထားတတ်ကြပါတယ်၊ ဒီလိုမိန်းမမျိုးရထားရင်တော့ ကံကောင်တယ်ပဲပြောရမှာပဲ။
RSတစ်ခုမှာ ကိုယ့်ကြင်ဖက်ကို ထောက်ထားစာနာတာ၊ ကိုယ်ချင်းစာတာ၊ ထောက်ခံအားပေးတာမျိုးက အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးကို ထာဝရတည်မြဲစေတဲ့အရာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က အချိန်တိုင်းထောက်ပံနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ သူတို့ကိုလိုအပ်မှသာ အကူအညီပေး ထောက်ပံ့ပေးတာမျိုးပါ။
မိန်းမကောင်းတစ်ဦးဟာ တခုခုဆို ပေါ့တန်တန်ဘယ်တော့မှသဘောမထားပါဘူး။ သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ပန်းတိုင်တွေနဲ့ အိမ်မက်တွေရှိသလို သင့်အိမ်မက်နဲ့ပန် းတိုင်တွေကို အကောင်းဆုံးကူညီတည်ဆောက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ထားမွန်မြတ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ဆို ကမ္ဘာကြီးကို ထမ်းထားနိုင်တဲ့ အားအင်မျိုးတွေ သင်ရရှိပါလိမ့်မယ်။ သူတို့က အရာရာရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။
စိတ်ထားမှန်တယ် တသမှတ်တည်း ရှိတယ်
စိတ်ထားမှန်တယ် တသမှတ်တည်း ရှိခြင်းက တန်ဖိုးရှိတဲ့ သီလတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခုတမျိုးတော်ကြတမျိုး သူတို့ကမလုပ်တတ်ပါဘူး။ သူတို့ကစိတ်မှန်ပါတ ယ်။
သူတို့က သင်ပျော်ဖို့ နေ့စဉ်အလုပ်တွေအောင်မြင်ဖို့ သင့်ကိုသင် ကြိုးစားအားထုတ်ချင်အောင်တွန်းအားပေးသလို သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း လက်တွေ့ ကြိုးစားအားထုတ်ပေးကြပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အသေးအဖွဲလေးတွေဖြစ်တဲ့ ညစာ ပြင်တာကအစ သူတို့က စိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်ပြီး ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်။
အဆင့်အတန်းဆိုတာ တကယ်တော့ အဝတ်အစားနဲ့ မပက်သက်ပါဘူး။ မိန်းမကောင်းတစ်ယောက်အတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ နေထိုင်ပြုမှုတဲ့ပုံစံတွေမှာ သိက္ခာရှိရှိ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်စွာ နေထိုင်တာမျိုးပါ။ ဆိုလိုတာက ကိုယ်ကိုကိုယ်တိုင်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြတဲ့လေးစားမှုမျိုးပါပဲ။ ကဲဒီတော့ သင်ကိုယ်တိုင်က ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးလား? သင့်ချစ်သူနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကရော သင့်ကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားလဲ? ဒီအချက်လေးတွေနဲ့ကိုက်ညီရင်တော့ ဘယ်သူက သတ်မှတ်သည်ဖြစ်စေ မသတ်မှတ်သည်ဖြစ်စေ သင်ဟာမိန်းမကောင်းလေးတစ်ယောက်ဆိုတာ ကျွန်တော် ရဲရဲကြီးပြောရဲပါတယ်။